Elizabeth McGeveran ayaa sheegay in $ 1 of $ 3 oo ah kharashka McKnight uu tago si kor loogu qaado himilooyinka bulshada. Sawirka sawirka: Molly Miles
Maqaalka soo socda ayaa markii hore daabacay Dabacsanaanta Philanthropy Janaayo 8, 2019 oo qayb ka ah a taxane khaas ah sheekooyinka ku saabsan saamaynta maalgelinta. Halkan waxaa lagu daabacaa ruqsad buuxa.
Qeybaha ugu waaweyn ee Mareykanka - 100 ama wax la mid ah $ 1 bilyan ama ka badan hantida - midna ma leh ballan qoto dheer oo saameyn ku leh maalgelinta marka loo eego McKnight Foundation.
Ford, si uu u hubiyo, wuxuu sameeyey bakhti ah 2017 markii uu ballan-qaaday in uu $ 1 bilyan oo doolar ku dallacayo maal-gashiga. Laakiin $ 1 bilyan ayaa ka dhigan in ka yar 9 boqolkiiba hantida Ford, aasaaskana waxa uu sheegayaa in ay qaadan doonto 10 sano si loogu qoondeeyo lacagtan.
Taas bedelkeeda, McKnight, oo leh hanti ku dhow $ 2.3 bilyan, ayaa mar hore ku yaboohay $ 187 milyan oo ah waxa loogu yeerayo maalgashiga saameynaha, taas oo loogu talagalay in lagu sii wado hawlaha aasaasiga ah ee ilaalinta deegaanka iyo kor u qaadida isbeddelka bulshada. $ 637 milyan oo kale ayaa lagu maalgeliyaa miisaaniyad ballaaran oo ku salaysan mabaadii'da guud ee himilada iyo qiimayaasha.
"Mid ka mid ah saddexda doolar ee kasta ayaa leh isbahaysi u dhigma," ayuu yiri Elizabeth McGeveran, oo horseeday barnaamijka saamayn dhaqaale ee McKnight tan iyo 2014-kii. Ma jiro aasaas kale oo ka mid ah mugga McKnight.
Bishan, McGeveran wuxuu noqonayaa agaasimaha maalgelinta McKnight. Ka dhigista mas'uuliyadda miisaaniyadda oo dhan ayaa "naga caawin doonta si ula kac ah iyo fursado badan oo aan ku maalgelinno maalgashadayada waxyeello wayn," ayuu yiri Kate Wolford, madaxweynaha McKnight.
Xarunta Qoyska ee Minnesota waxaa aasaasay 1953 William McKnight iyo xaaskiisa, Maude McKnight. William McKnight wuxuu ku qaatay xirfadiisii 59-sano ee shirkadda 3M, isagoo kordhay inuu noqdo guddoomiye iyo gudoomiye. Dhalashadiisa waa xubin ka mid ah guddiga aasaasiga ah, iyo xubnaha qoyska afaraad ee qaraabada ah waxay wadeen ballanqaadyada saameynta maalgashiga.
"Xaaladda degdegga ah ee cimilada ayaa runtii na riixday inaan sheegno waxaan dooneyno inaan wax badan qabanno," ayuu yiri Wolford. McKnight wuxuu sameeyey maalgelinta la xidhiidha barnaamijka, badiba qaab deyn ah oo loogu talagalay sadaqada. Laakiin, waxay tiri, "waxay qaadataa fikrad ka duwan si ay u eegto hanti dhan."
McKnight uma aysan baahnayn in uu la tartamo kooxda maal-gashiga gudaha, taas oo laga yaabo inay iska caabisay habka cusub. (Guddi guddi, oo gacan ka helaya la-taliye, maalgelin maareyn ah.) Iyada oo shaqada, McKnight wuxuu John Goldstein ka keenay Imprint Capital sidii lataliye. Goldstein wuxuu leeyahay McKnight: "Waxay yihiin urur aad u qulqulaya, dhaqan ahaan caafimaad leh oo dadka wada shaqeeya. Tani ma noqon karto kiiska oo dhan aasaas weyn. "
McKnight sidoo kale wuxuu doonayay inuu wax ka qabto. "Waxaan isku dayeynay inaanu fekereyno oo aan sameyno dadaalkeena, laakiin waxaan dooneynay inaan bilowno," ayuu yiri Wolford. Sanadkii 2014, aasaaska ayaa $ 200 milyan oo doolar ah ku sameeynaya saamaynta maalgashiga, qiyaastii boqolkiiba boqol ee McKnight's.
"Qeybaha ugu waaweyn ee Mareykanka - 100 ama wax la mid ah $ 1 bilyan ama ka badan hantida - midna ma leh ballan qoto dheer oo saameyn ku leh maalgashiga McKnight Foundation."
Maanta, dakhliga McKnight waxaa ka mid ah laba maalgalin daraasad ah oo saameynaya, fasallo kala duwan: suuqyada dadweynaha, raasamaalka ganacsiga, sinnaanta hantida gaarka ah, iyo PRI oo lagu aasaasay ujeedo samafal ah. Qaarkood waxaa lagu sifeeyay "maalgalin la isku daray," taasoo macnaheedu yahay inay muujinayaan qiimaha aasaasiga ah. Waxaa ka mid ah:
Maareynta Maalgashiga Guud. McKnight ayaa $ 157 milyan oo doolar ku maalgelisay miisaaniyadda ay maamusho Generation, oo ah maamulaha hantida London oo ay aasaaseen madaxweyne ku xigeenkii hore ee Al Gore iyo lamaanaha Goldman Sachs, David Blood. Qiyaastii $ 125 milyan ayaa galay Santuukha Global Equity Fund, kaas oo ku maalgeliya shirkadaha dawladda ee hela "fursado dhaqaale oo ka soo baxa meeraha cadaadiska, oo ku foognaaya isbeddellada sida kobcinta magaalooyinka, yaraanta biyaha, iyo qasab ku ah joojinta isbeddelka cimilada." Sanduuqa ayaa si fiican u qabtay. Dhab ahaantii, waxay ahayd sanduuqa saamiga ugu fiican ee McKnight ee afarta sano ee la soo dhaafay, ayuu yidhi McGeveran. Muddo ka dib, McKnight waxa uu kordhiyay maal-galintiisa iyo sanduuqii "ka qalin-jabiyay" saamiga saamiga ugu wayn ee loo yaqaan 'centralization', oo abuuraya meelo badan oo saameyn kale oo maalgashi ah.
Mellon Capital Management. Iyada oo maalgelin $ 100 milyan ah, McKnight waxa uu Mellon ka dhaadhiciyay, mid ka mid ah maamulayaasheeda muddada dheer, si loo abuuro ballaadh sanduuqa waxtarka carbon-efficiency taas oo ka dhigaysa maalgashi yar oo ka yimaada shirkadaha kaarboonka-qashin-qubka iyo in ka badan shirkadaha ku hawlan ugudbinta carbon. Shirkad dhuxul ah oo aan ahayn kuwa soo saara shidaal kale. Marka la eego qiyaastii 1,000 hanti, sanduuqa ayaa hoos u dhigaya xoojinta karboonka ee faylihiisa - oo loo qiyaaso sida qulqulka gaaska aqalka-gaaska ah ee doolarka iibka - boqolkiiba 53 marka la barbar dhigo heerkiisa, McKnight wuxuu leeyahay . Waxqabadka maaliyadeed ee dhaqaaluhu wuxuu u dhigmey qaabka loo yaqaan 'benchmark'.
Bartamaha BioAg waxay la shaqaysaa wax soo saarayaasha si loo gaaro beeraha ka sii wanaagsan iyada oo loo marayo jawi fiican ™. PosiGen waxay caawisaa mulkiilayaasha dakhliga hoose-dhexdhexaad ah kaydinta biilasha bil kasta ee korantada iyada oo dhalinaysa awood koronto.
Miisaaniyado kale, oo loo yaqaan "maalgashiga saameynta sare," ayaa si toos ah ula jaanqaadaya barnaamijyada McKnight. Waxay u muuqdaan kuwo yaryar iyo khatar ka badan maalgashiyada kaydka dadwaynaha ama canshuuraha, iyo waxaa loogu talagalay inay lahaadaan "filashooyinka dhaqaale ee suuqyada dhow." Waxaa ka mid ah:
G2VP. Shirkad raasamaal oo ku taal Silicon Valley, G2VP dib u soo kabashada shirkadaha oo isticmaala teknoolojiyada casriga ah si ay u dhistaan warshado dhaqameedyo waxtar leh. Shirkadaha shirkaduhu waxay ka koobanyihiin Scoop, oo ah shirkad ku salaysan maareyn ah oo isku xirta rakaabka kuwa la shaqeeya, iyo Proterra, oo ka dhigaya basaska korantada. McKnight wuxuu ku maal-galiyay $ 7.5 milyan.
Bartamaha Bio-Ag. Tani waa kiis gaar ah oo McKnight ay si toos ah ugu maalgeliso shirkad, iyada oo aan loo marin maamulaha maaliyadda ama dhexdhexaadiye kale. Bartamaha Bio-Ag iibiya alaabooyin badan oo lagu horumariyo ciidda, taas oo yareyneysa baahida loo qabo bacriminta kiimikada. McKnight waxay ku maal gashey $ 5 milyan sababtoo ah shirkadda waxay si toos ah u taageertaa barnaamij aasaasi ah si loo soo celiyo tayada biyaha iyo adkeysiga Wabiga Mississippi.
PosiGen. Iyadoo $ 8 milyan oo amaah ah oo suuq ah suuqa, McKnight wuxuu ku biiray koox maal-galiyaal ah oo taageera shirkaddan qoraxda loo yaqaan 'solar-leasing' kaas oo u adeega dadka dakhliga hoose ee dhexdhexaadka ah. PosiGen ayaa muujisay in ay suurtagal tahay in la dhiso ganacsi qoraxda leh oo waxtar leh oo awood u leh in uu la tartamo awooda dabka ee meelaha sida PosiGen ee gobolka guriga ee Louisiana.
McKnight wuxuu si faahfaahsan uga warbixiyaa saameynta ay saameysay saameynta ay leedahay. "Illaa iyo hadda, dib u soo celinta dhaqaale waxay ahaayeen kuwo wanaagsan ama ka wanaagsan sidii aan fileynay," ayuu yiri Wolford. "Ma jirto jaantus ama mid lagama maarmaanka u ah dulsaaradaada."